कसरी इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने? - सामाजिक
कसरी इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने?
के तपाईं इन्स्टाग्रामबाट ब्रेक लिन चाहनुहुन्छ र आफैमा फोकस गर्न चाहनुहुन्छ?तर तपाइँ इन्स्टाग्रामबाट तपाइँको खाता कसरी मेटाउने भनेर थाहा छैन। चिन्ता नलिनुहोस्, र हामी तपाईंको लागि एक विस्तृत पोष्ट तयार गर्यौं जुन तपाईं कसरी आफ्नो इंस्टाग्राम खाता सफलतापूर्वक मेटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चरणहरूको माध्यमबाट मार्गदर्शन गर्दछ।
वा यदि तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनुहुन्न भने, हामी ईन्स्टाग्रामबाट ब्रेक लिनको लागि अर्को एक तरीका पनि उल्लेख गर्दछौं जहाँ तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खातालाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ।हाम्रो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने चरणहरू जान्नको लागि यस पोस्टलाई पूर्ण पढी दिनुहोस्।
एक इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने चरणहरू:
एक इन्स्टाग्राम मेटाउनु एकदम सरल छ, र यदि तपाईं हामीसँगै लाग्नुभयो भने तपाईं हराउनुहुनेछैन। हामीले प्रत्येक चरण उल्लेख गरेका छन जुन स्थायी रूपमा इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनको लागि आवश्यक छ। अब हामी हेरौं कि एक इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनको लागि के चरणहरू आवश्यक छन्।
क्लिक गरेर इन्स्टाग्रामको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस् यहाँ ।
तपाईंको प्रयोगकर्ता प्रमाण प्रयोग गरेर तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा लग इन गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई आफ्नो पीसीबाट लग इन गर्न सिफारिस गर्दछौं किनकि तपाईं आफ्नो मोबाइल खाता इन्स्टाग्राम मोबाइल अनुप्रयोगबाट मेटाउन सक्नुहुन्न।
एक पटक तपाईले आफ्नो खातामा भिन्नै लग ईन गर्नुभयो क्लिक गर्नुहोस् यहाँ।
एकचोटि तपाईंले माथिको लिंक खोल्नुभयो भने, तपाईंसँग एउटा पृष्ठ हुनेछ जुन तपाईंलाई तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनको लागि तपाईंको कारण सोध्छ। तपाईं आफ्नो खाता मेटाउनको लागि आफ्नो कारण उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको खाता मेटाउनको लागि आफ्नो कारण बताए पछि तपाईले अब आफ्नो इन्स्टाग्राम पासवर्ड प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ तपाईको खाताको समाप्ति रुजू गर्न र पुष्टि गर्नका लागि।
तपाईको पासवर्ड प्रविष्ट गरे पछि तपाईले क्लिक गर्नुपर्नेछ 'स्थायी रूपमा मेरो खाता मेट्नुहोस्' तपाईको खाता मेटाउनका लागि। एकचोटी सकियो तपाईको खाता इन्स्टाग्रामबाट मेटिनेछ।
यी चरणहरू अनुसरण पछि तपाईंको खाता सफलतापूर्वक इन्स्टाग्रामबाट मेटाइनेछ। तर त्यहाँ केहि चीजहरू हुनसक्दछन् जुन तपाईंले आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनु अघि तपाईंले बिर्सनु हुँदैन। अब पोष्टको अर्को सेक्सनमा हामी केही चीजहरू छलफल गर्नेछौं जुन तपाईंले आफ्नो खाता मेटाउनु अघि विचार गर्नु पर्छ।
तपाइँको इन्स्टाग्राम खाता अस्थायी रूपमा कसरी असक्षम गर्ने?
तपाइँको इन्स्टाग्राम खातालाई अस्थायी रूपमा असक्षम गर्नका लागि, तपाइँ यी सरल चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको गतिविधि एक समयको लागि लुकाउन सक्नुहुनेछ जबसम्म तपाइँ फिर्ता आउँन ठीक महसुस गर्नुहुन्न।
क्लिक गरेर आधिकारिक इन्स्टाग्राम वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस् यहाँ ।
तपाईंको प्रयोगकर्ता प्रमाण-पत्र प्रयोग गरेर तपाईंको खातामा लग इन गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले आफ्नो स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने कुनामा तपाईंको प्रोफाइल फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने, जहाँ एक विकल्प पट्टी ड्रप हुन्छ।
तपाईंको खाता सेटिंग्समा जानका लागि अब 'सेटिंग्स' ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईको खाता सेटिंग्समा जानु भएपछि, 'अस्थायी मेरो खाता असक्षम गर्नुहोस्' खोज्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्। अब क्लिक गर्नुहोस् प्रमाणिकरण पृष्ठ प्राप्त गर्नका लागि।
अब, एकचोटि तपाई प्रमाणिकरण पृष्ठमा हुनु भएपछि तपाईले आफ्नो खाता असक्षम पार्न चाहानु भएको कारण प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको खाता असक्षम गर्ने प्रमाणित गर्न तपाईको खाता पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
एक पटक काम समाप्त भए पछि तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 'अस्थायी रूपमा मेरो खाता अक्षम गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको प्रक्रिया पूरा गर्न
एकचोटि तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो, तपाईंको खाता अस्थायी रूपमा अक्षम हुनेछ जबसम्म तपाईं इन्स्टाग्राममा फिर्ता आउन ठीक महसुस गर्नुहुन्न।
कारकहरू तपाइँको इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनु अघि विचार गर्न:
तपाईंले आफ्नो खाता इन्स्टाग्रामबाट मेटाउनु अघि यी कारकहरू विचार गर्नुहोस् ताकि तपाईं कुनै पनि कुराको याद गर्नुहुन्न।
एकचोटि तपाईले आफ्नो खाता मेटाउनु भयो, तपाईले आफ्नो खाता पुन: उही प्रयोगकर्तानामको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुने छैन जबसम्म कसैले तपाईको उस्तै प्रयोगकर्तानाम प्रयोग गर्दैन।
मेटाएपछि तपाईं आफ्नो फोटो, कथा, र च्याटहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंको सबै डाटा मेटिनेछ। तपाईंको कुनै पनि फोटो वा कुनै डाटा गुमाउनबाट बच्न, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो उपकरणमा भण्डारण गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको च्याटको स्क्रीनशट लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंको खाता एक व्यवसाय खाता हो भने, तपाईं अब आफ्नो व्यवसाय प्रमोट गर्न सक्षम हुनुहुने छैन, र व्यापार खाता को सबै सुविधाहरू निलम्बित हुनेछ।
यदि तपाईं यी चीजहरूको केहि हुन चाहानु हुन्न र आफ्नो खाताको सबै कुरा चाहानुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो खातालाई अस्थायी रूपमा असक्षम पार्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंसँग तपाईंको खातामा सबै चीज छ र अझै पनि लुकेको छ। हामी अब चरणहरू हेर्नेछौं कि तपाईं कसरी अर्को खातामा तपाईंको खाता असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए यी चरणहरू थिए कसरी तपाईं आफ्नो इंस्टाग्राम खाता सफलतापूर्वक मेटाउन सक्नुहुन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो, र तपाईं यो पोष्ट पढेपछि आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउन सक्षम हुनुहुनेछ। तल टिप्पणी अनुभागमा आफ्नो प्रतिक्रिया साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
व्हाट्सएप बनाम सिग्नल - कुन एक योग्य छ?
नि: शुल्क PSN कोड PS3 २०१।
नि: शुल्क अनलाइनका लागि टिभी एपिसोड हेर्नुहोस्
समय मार्न राम्रो वेबसाइटहरू
त्यहाँ एक तरिका छ नि: शुल्क अमेजन उपहार कार्डहरू प्राप्त गर्न
नेटफ्लिक्ससँग कसरी सुरू गर्ने
टम्बलरमा संवेदनशील सामग्री बन्द गर्नुहोस्